केन्द्रको ‘रबर स्ट्याम्प’ नबन्ने उद्घोष : प्रदेश ३ मा राजधानी विवाद :: Nepal Post Dainik केन्द्रको ‘रबर स्ट्याम्प’ नबन्ने उद्घोष : प्रदेश ३ मा राजधानी विवाद | Nepal Post Dainik
केन्द्रको ‘रबर स्ट्याम्प’ नबन्ने उद्घोष : प्रदेश ३ मा राजधानी विवाद
काठमाडौँ १४ पुस । प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी हेटौँडा राख्ने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय निर्णयप्रति सोही पार्टीका सांसदहरुले चर्को विरोध गरेका छन् ।
उनीहरुले उक्त निर्णय कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै केन्द्रको हस्तक्षेपकारी निर्णय आफूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । नेकपाका सांसदहरुले संघीयता र संविधानको समेत मर्म विपरित प्रदेशका सांसदहरुले गर्नुपर्ने निर्णयमा पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै यदि राजधानी तोक्ने विषयमा हस्तक्षेप गरे आफूहरुले त्यसलाई उल्ट्याइदिने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले नेकपा नेतृत्वले यस्तो अविवेकी र असंवैधानिक निर्णय गर्लाजस्तो आफूलाई नलाग्ने बताए । ‘यसरी निर्णय गर्नु भनेको जनमत र संविधान विपरित समेत ठहर्छ,’ उनले भने । उनले संघीयता र संविधानले प्रदेश सभालाई आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने अधिकार दिएकाले विधिसम्मत ढंगले प्रदेश ३ को राजधानी टुङ्ग्याउने पनि बताए । ‘हामी केन्द्रको रबर स्ट्याम्प बन्दैनौँ ।
धादिङका अर्का प्रदेश सांसद तथा नेकपाकै नेता राजेन्द्र पाण्डेले पनि नेताहरुले केन्द्रबाट निर्णय गर्दैमा त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको बताए । ‘संविधानमा के लेखिएको छ ? त्यो संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरु को को हुन् ? किन हस्ताक्षर गरे ? त्यसकारण राजधानीको टुङ्गो लगाउने अधिकार संविधानले जसलाई दिएको छ, त्यसले मात्रै काम गर्छ, गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले रातोपाटीसँग भने, ‘कसैले भन्दैमा त्यही गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । हामीले त पहिलो प्राथमिकता संविधानलाई दिने हो ।’ रातोपाटिबाट